Zvinyorwa zvataurwa: Yedu webhusaiti kero ndeiyi: https://bikehike.org.
Zvinyorwa zvataurwa: Apo vashanyi vanosiya zvinyorwa panzvimbo iyi yatinounganidza nhamba inoratidzirwa mupepanhau remashoko, uyewo kero yeIndaneti yevakashanyi uye mushandisi weshandisi yejeri yevashanisi kuti vabatsire kuparidzirwa kwepamu.
Tsamba yakanyatsosimbiswa yakasikwa kubva kune email yako (inonziwo hash) inogona kugoverwa kushanda yeGravatar kuti uone kana uri kuishandisa. Basa reGeralvatar rekuchengetedzwa kwebasa rinowanika pano: https://automattic.com/privacy/. Mushure mokubvumirwa nemashoko ako, mufananidzo wako weporofita unooneka kuvanhu vose mumamiriro ekutaura kwako.
Zvinyorwa zvataurwa: Kana iwe ukakanda mifananidzo kune webhusaiti, iwe unofanirwa kurega kutora mifananidzo ine dhimbedzero yedunhu (EXIF GPS) yakabatanidzwa. Vashanyi vepanzvimbo ino vanogona kutora uye kubvisa chero dunhu renzvimbo kubva pamifananidzo pawebsite.
Zvinyorwa zvataurwa: Kana iwe uchisiya mavoti pane site redu iwe unogona kusarudza-kupinda kuchengetedza zita rako, kero ye email uye webhusaiti mukiki. Izvi ndezvenzira yako kuitira kuti iwe usafanira kuzadza zvaunofungazve kana iwe uchibva kune imwe mhinduro. Aya makiki achagara kwegore rimwe chete.
Zvinyorwa zvataurwa: Zvinyorwa panzvimbo ino zvinogona kusanganisira zviri mukati mazviri (semuvhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwewo). Zvinyorwa zvinyorwa kubva kune mamwe mawebsite zvinofanirwa nenzira chaiyo sekuti kana mushanyi akashanyira imwe yewebsite.
Zvinyorwa zvataurwa: Kana iwe ukakumbira password reset, yako IP kero inozoverengerwa mune iyo reset email.
Zvinyorwa zvataurwa: Kana iwe uchisiya mhinduro, mhinduro uye metadata yayo inochengetwa nokusingaperi. Izvi ndizvo zvatinokwanisa kuona nekubvumira chero zvinyorwa zvinotevera zviripo pane kuzvibata mumwero wokuenzanisa.
Zvinyorwa zvataurwa: Kana iwe uine kero pawebsite ino, kana wakasiya mazano, unogona kukumbira kuti uwane firiji rekutumira kwemashoko ega edu atinenge tabata pamusoro pako, kusanganisira chero dheyo iwe watipa. Iwe unogonawo kukumbira kuti tibvise chero dunhu rega rega ratinenge tabata pamusoro pako. Izvi hazvirevi chero chero dhesi yatinofanira kuichengeta kuti tive nehutungamiri, mutemo, kana kuti kuchengeteka.
Zvinyorwa zvataurwa: Mhinduro dzevashanyi dzinogona kuongororwa kuburikidza nebasa rekuzvidzivirira re spam.